Momba anay - milina plastika Zhejiang Tonva CO., LTD
Masinina plastika Zhejiang Tonva CO., LTD
TONVA (AZ turnkey supplier, 1993), notarihan'ny ISO9001: 2008 International Quality Control System sy CE & SGS certificattion, dia teo an-dàlam-pamolavolana vokatra avo lenta sy teknolojia vaovao. Ny asa aman-draharaha ataonay dia manarona ny fanamboarana ny Machine Blow Molding, ny Machine Machine Blow Molding ary ny mould. Afaka manondrana milina 400 eo ho eo isan-taona any amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay, toa an'i Bangladesh, India, Pakistan, Afrika atsimo, Arzantina, Malezia, UAE, Etazonia sns.
Ny milina famolavolana fantsom-panafody dia mihatra amin'ny vokatra ampiasaina isan'andro, tavoahangy rano fanatanjahan-tena, tavoahangy famonoana bibikely, tavoahangy fanafody, tavoahangy kosmetika, fitoeram-panangonana sakafo, faritra fanaka, faritra misy fiara, kilalao, canina jerry ary plastika poakaty kely na salantsalany vokatra.
Ny fanohanana maharitra tsy tapaka dia fitaovana fampitaovana tsara indrindra ho anay. Isaky ny dingana rehetra amin'ny tetikasanao, eto izahay hanome torohevitra ara-teknika. Ny fahafaham-ponao amin'ny fanandramana mividy dia fanekena lehibe ho anay. Izahay koa dia manolo-tena hahatanteraka ny fahombiazan'ny famokarana, miaraka amin'ny tanjon'ny fiaraha-miasa mandresy.
Maherin'ny 30 taona ny traikefa amin'ny famokarana matihanina, manome anao milina sy fitaovana avo lenta.
Manamboara milina tsy manara-penitra arakaraka ny filan'ny mpanjifa ary manamboatra fitaovana mifaninana aminao.
Fantaro ny Indostria 4.0 ary hampiroborobo ny "Fifandraisana amin'ny solosaina-olombelona"
Ekipa serivisy aorian'ny fivarotana an-tserasera dia manome anao serivisy kalitao.
Omeo fanampiana aorinan'ny varotra aorian'ny famokarana milina anao ary mivoara miaraka aminao.
Mifantoka amin'ny kalitaon'ny milina mihoatra ny 30 taona, mitondra anao ny androm-piainan'ny masinina lava kokoa. Manavao hatrany sy mivoatra, manome fitaovana milina tsara kokoa, mahomby ary haingana kokoa ho an'ny tsena.
Ny teknolojia fototry ny lohan'ny milina Die ary ny fivezivezena miaraka amin'ny fanidiana ny famolavolana tsy miankina dia tombony tokana ananantsika eo amin'ny indostrian'ny famolavolana.
Ny fanavaozana no hery mpamokatra voalohany ary loharanon'ny herin'ny orinasa.
Amin'ny maha orinasa kintana manokana azy amin'ny famokarana milina famolavolana,> 7 \_ OW \_ dia mametraka foana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia. Ny orinasa dia manana efitrano fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina, ary miaraka amina ekipa R & D matihanina, ao anatin'izany ireo injenieran'ny famolavolana mandroso, injenieran'ny famolavolana bobongolo mandroso, teknisiana famolavolana bontolo, sns. Ho valin'ny filàna samihafa amin'ny tsena, izahay andramo hatrany ny vahaolana vaovao, manasokajy ny tsenan'ny milina famolavolana faran'izay avo, fitaovana mahomby sy avo kokoa.
Ny fanavaozana dia mitarika an'i YAOVA handroso hatrany.
Ny orinasa dia manaraka ny "kalitaon'ny fahavelomana, ny fanavaozana ary ny fampandrosoana, ny filozofian'ny orinasa mifantoka amin'ny tsena, mifantoka amin'ny serivisy", ny serivisy ampiasain'ny mpampiasa, ny karazany, ny serivisy marobe, dia vonona ny hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny sehatra rehetra mba hamoronana
Mifandraisa aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa